Diinteena waxa ay leedahay Qawaacid diini ah culimada diinta Asalka u ah ay yaqanaan.
Thursday July 29, 2021 - 11:00:54 in Articles by Xaaji Faysal
Sida ay sheegyen culimada masjidka si looga badbaadiyo dhalinyaradan Dambiga ugu weyn ee uu qof islaam
Arintaan ah in masjidka lagu dhex ciyaaro gameska Ma banaano 100% Balse diinteena waa naxariis mararka qaar Waxa jiro waxyaabo ka xaaram si guud xiliyo qaar xalaal ku noqonaya.
Sida ay sheegyen culimada masjidka si looga badbaadiyo dhalinyaradan Dambiga ugu weyn ee uu qof islaam ah galo oo ah in uu naf gooyo ayaa loogu ogolaaday In masjidka Joogan ka dibna xiliyada qaar masjidka dhexdiisa Ku dhex ciyaaraan Playstation iyo ciyaaro kale.
Diinta waxa asal u ah qawaacid qoran taas oo in lagu dhaqmo waajib tahay Sida awgeed waxa jirto qaacida diini ah Oo dhahda (اخف الضررين ) oo micnaheed yahay hadii ay timaado in laba shey oo xaaraam mid laga faksan waayo in la sameeyo Waxa qasab ah in la sameeyo midka dambiga yar.
Hadalka micnhisa in aad fahanto waa muhiin Waa laba shey oo xaaram hadii in mid la sameeyo laga fursan waayo waxa diinta ku baneyneysa oo aadan danbi kaso gaareyn in aad sameeso midka dambiga fudud.
Marka in dhalinyarada galaan dambiga xag alle kan ugu weyn oo uu galo qof islaaminmo sheegto galo oo ah in uu naf gooyo in ay galaan ama in uu Masjid ku dhex ciyaaro Playstation keeba dambi fudud oo la qaadan karaa ?
Sida muuqato dhalinyartaan xumaha Ayaa la rabaa in masjidka looga haayo drugs aysan baran lkn Waan wada oganahay in dhalinyaro Mareekanka ku nool masjidka dhex fadhi aysan aqbalayn oo ay hadii ay baxaan dhibaato iyo drugs kasii aadi karaan marka sida darteed in waxyaabihi magaalka u aadi lahaayeen In looso dhaweeyo Lagana baaqsado Dambigaas weyn waa mid saxan sida culimada ay Go'aamiyeen.
Balse mid aan ku daro waxa culimada la haboon in masjidka banaankiisa ya geeyaan Waxyabahaas at least si masjidka Barakeysan Iyo diinta ay sumcad xumo ugu bixin.
W/Q :- Abdulsaabir haaji